Ways to Develop Your Creativity - JobExpress Myanmar
Business တစ်ခု တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာ အတွေးအခေါ်idea အသစ်တွေက အရေးပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ‌ လူတွေအမြင်မှာ အမြဲတမ်းတွေးနေတယ်ဆိုတာက အချိန်ဖြုန်းတယ်လို့ထင်ပါသလား? ကိုယ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်က ထူးခြားနေမယ်ဆိုရင် သူများတွေထက် ခြေတစ်လှမ်းသာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်‌တော်တို့အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ခုကို စပြီးလေ့လာသင်ယူတဲ့အချိန်က အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လေ့လာစရာအသစ်တွေကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိရမယ်၊ လက်ခံရပါမယ်။ လက်ခံနိုင်မှလည်း သူများနည်းတူအောင်မြင်မယ်ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် သူများထက်ခေါင်းတစ်လုံးသာဖို့ဆိုတာ Idea ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိ ဖို့လိုပါတယ်။
Ideaတွေ၊ Creative thinkingတွေ တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့အချက်ကလေးတွေကတော့
(၁) Commit Yourself To Creativity
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်မူစွမ်းရည် မြင့်မားချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အရာအပေါ် အချိန်ပြည့် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေ၊ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုမြုပ်နှံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးပမ်းနေမူတွေကို ဘယ်တော့ မှလက်မလျော့လိုက်ပါနဲ့။ ပန်းတိုင်တစ်ခုခု တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားပါ။ လိုအပ်လျှင်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီကအကူအညီတောင်းပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Creative Thinkingတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ အချိန်ထဲကအချိန်တစ်ခု ချန်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။
(၂) Link with Your Hobby
ငယ်ငယ်ကစာကျက်ရင် အကြောင်းအရာကို သေချာနားလည်အောင်မဖတ်ပဲ နှုတ်တိုက်အလွတ်ကျက်လေ့ရှိတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စာကျက်ရင်ပိုပြီး မှတ်မိလွယ်မလဲ ဆိုတာကိုမတွေးကြပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ကဗျာလေးတွေ၊ ကျက်မှတ်နည်းအသစ်တွေနဲ့ သင်ကြားတဲ့အခါကလေးတွေပိုပြီး မှတ်မိရလွယ်ကူလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆရာ၊ဆရာမတွေရဲ့ Creativity Thinking တွေကောင်းလာတဲ့အခါ ခေတ်လူငယ်တွေကပိုပြီးထက်မြက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Creative Thinking ဆိုတာ Talent တစ်ခုမဟုတ်ပဲ သင်ယူလေ့လာနိုင်တဲ့ Skill တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ Creative Thinking ကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
(၃) Take Risks
ကိုယ်က Creative Skills တွေပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့တည်ဆောက်တဲ့အခါ စွန့်စားလိုစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မူတိုင်းဟာ အမြဲအောင်မြင်မူရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမူက အနာဂတ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့Creative Talentsတွေ၊ Creative Skills တွေကို မြင့်တက်လာစေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အရာတစ်ခုအတွက် Risk ယူရမှာ မကြောက်ပါနဲ့။
(၄) Build Your Confidence
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မူမရှိခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့တီထွင်နိုင်မူစွမ်းရည်တွေကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မူရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မူနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုးတက်လာတဲ့အရာတွေကို မှတ်သားထားပါ။ မိမိကိုယ်ကို ချီးကျူးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့ Creative Skills များအားအမြဲတမ်းရှာဖွေနေပါ။
(၅) Look for Inspiration
အတွေးအခေါ်သစ်တွေက ထိုင်နေရင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်းကိုယ့်ကို အမြင်ကျယ်စေမဲ့အရာတွေ၊ ဗဟုသုတရစေမဲ့အရာတွေကို ရှာဖွေပါ။ စာများများဖတ်ပါ။
စိတ်ကို ပိုပြီးလန်းဆန်းစေမဲ့ သီချင်းမျိုးတွေနား‌ထောင်ပါ။ ကိုယ်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူ၊ ပညာပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတွေနဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆွေးနွေးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ တိုးတက်လာနိုင်တဲ့ဘယ်နည်းလမ်းကိုမဆို အသုံးချပါ။
(၆) Make Time For Creativity
အချိန်တစ်ခု မသတ်မှတ်ပဲ သေသေချာချာမလုပ်ပါက ကိုယ့်ရဲ့ Creative Talents တွေက တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အပတ်စဥ်အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားပြီး ဖန်တီးနိုင်မူစွမ်းရည်ကို အားရုံစူးစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလကားနေထိုင်တွေးနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်မသိသေးတဲ့ပညာတစ်ခုကိုလေ့လာဖို့၊ ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းလာဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကို အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်လေ့လာတာ မျိုးဖြစ်တယ်။
‌Creativity ကောင်းတယ်ဆိုတာ တွေ့ကြုံရတဲ့ပြသာနာအသစ်တွေကို လတ်တလောဖြေရှင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။ အနုပညာရှင်သမားတွေ၊ ကဗျာဆရာတေွအတွက်တို့ ကန့်သတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ လူတန်းစားမ‌ရွေး အသုံးဝင်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်ကပေးထားတဲ့အချက်လေးကို တစ်ခုချင်းဆီ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ideaကောင်းတဲ့ လူတော်လူကောင်းလေးတွေဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်လဲ?
2020 နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် Booming ဖြစ်လာနိုင်သော လုပ်ငန်း (၁၀)မျို: – အပိုင်း (၂)
အချိန်ကို စနစ်တကျ အကျိူးရှိရှိအသုံးချတတ်ဖို့